सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि गरिने क्वारन्टीन भनेको के हो ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि गरिने क्वारन्टीन भनेको के हो ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २४ माघ शुक्रबार १६:५१
अहिले चीनको हुबे प्रान्तबाट १८० नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइने तयारी हुँदैछ। यहाँ ल्याइएपछि उनीहरू सबैलाई क्वारन्टीनमा राखिनेछ।
त्यसका लागि राजधानी उपत्यकामा चार स्थानको टुङ्गो भइसकेको अधिकारीहरूको भनाइ। क्वारन्टीन व्यवस्थित बनाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको सुविधासहित सुरक्षित स्थानमा राख्ने र अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। उक्त अवधिमा सङ्क्रमित क्षेत्रबाट उद्धार गरिने व्यक्तिहरूलाई नियमित अनुगमन गरेर रोगका लक्षण भए नभएको निधो गरिन्छ।
कोरोनाभाइरसको हकमा कम्तीमा दुई सातासम्म क्वारन्टीन गर्ने अर्थात् निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उक्त अवधिमा क्वारन्टीनमा राखिएका मानिसहरूको नाक, घाँटी तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अङ्गको भित्री भागबाट समेत विभिन्न नमुना निकालेर परीक्षण गरिन्छ।
कोरोनाभाइरसबाट अतिप्रभावित चीनको हुबे प्रान्तमा नेपालीहरू उद्धारको पर्खाइमा छन्। सरुवा रोग फैलिएको स्थानबाट आउने भएकाले निश्चित अवधिका लागि उनीहरूलाई चिकित्सकीय निगरानीमा चार स्थानमा अलग्गै राखिनेछ।
थप २३२ जनामा कोरोना संक्रमण, ३८६ जना संक्रमणमुक्त
काठमाडौं । नेपालमा थप २३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य